ဆန်(၂) ဆန် ဘုရားသမိုင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History » ဆန်(၂) ဆန် ဘုရားသမိုင်း
ဆန်(၂) ဆန် ဘုရားသမိုင်း
Posted by mandalarthu on Jul 7, 2011 in History |3comments
ထူးဆန်း အံ့ဖွယ် ဆန်(၂) ဆန် ဘုရားသမိုင်းအကျဉ်း
၁၃၇၁ -ခုနှစ်၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၃)ရက်၊ (၆.၅.၀၉) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ(၅း၃၀)နာရီခန့် တွင် မန္တလေးမြို့ ၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့ နယ်၊၈၄x၈၅လမ်းနှင့် ၃၂x၃၃လမ်းကြား၊ ယွန်းဝင်းယပ်ဝင်းရှိ မဟာလောကဇိနရံသီ စေတီတော် ဘုရားဝင်းအတွင်း၌ ပေါက်ရောက်လျက်ရှိသော သက်တန်းနှစ်(၁၅၀)ခန့် ရှိ ဗမာကုက္ကိုပင် ကြီးသည် လေတိုက်သဖြင့် လဲကျသွားခဲ့၏။ လဲကျစဉ်က ဓမ္မာရုံအတွင်းရှိ ဘုရားများနှင့် အနီးရှိအိမ်တို့ မှ လူများအား လုံးဝထိခိုက်ခြင်းမရှိပေ။
ယင်းကုက္ကိုပင်ကြီးကို (၂၃-၅-၂၀၀၉) ရက်နေ့ တွင် ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီး (၂၄-၅-၂၀၀၉) ရက်နေ့ တွင် ပန်းပုဆရာကိုထွန်းလင်းအဖွဲ.သားများ၊ရပ်ကွက်ထဲကလူများ၏အကူအညဲီယူကာ ကရိန်းကားကြီးဖြင့် ဘုရားဝင်းအတွင်းမှ ဆွဲထုတ်ကြသည်။ (၂၅-၅-၂၀၀၉)ရက်နေ.တွင်ကုက္ကိုပင်ကြီးကိုလိုအပ်သလို လွှကြီးများဖြင့်ဖြတ်ပိုင်းပြီး၊ ကရိန်းကားနှစ်စီး မ,ယူပြီး ရေတံခွန်တောင်ခြေရှိ သစ္စဝေဒဂူ မိုးကုတ်ရိပ်သာသို့အပြီးသယ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။.
ထူးခြားသည်မှာ ကုက္ကိုပင် ကြီးအတွင်းရှိ အမြစ်များသည် အောက်မြေကြီးထဲသို့မဆင်းဘဲ ပင်စည်အတွင်းမှနေ၍ အထက်ပေ(၇၀)ခန့် အထိ ဆန်တက်နေသည်ကိုတအံ့တဩတွေ့မြင်ကြရခြင်းဖြစ်၏။
ပန်းပု တော် တော့လည်း သစ်လုံးကနေ ကြည်ညိုဖွယ် အဆင်းရှိတဲ့ ဘုရား ဆင်းတု ဖြစ်သွားတယ်။
ကြည်ညိူစရာ အလွန်ကောင်းပါတယ် ။ မြန်မာ ပန်း(၁၀) မျိုးကို အားပေး ထိန်းသိမ်းသင့်နေပါပြီ ။ ဘာဂလေ က ဆရာတယောက်က သူအိမ်မှာ မြန်မာ (ရှမ်းလက်ရာ) ယွန်းဘုရား ရှိတယ် ၁၉၉၃ ကသယ်လာတာတဲ့ . သူကတော့မြန်မာရှေးဟောင်းပစ်စည်းရတယ် ဆိုပြီး ကြွားပြောတာ . ကိုကတော စိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်ရတယ် ။